बडुवाल हत्या प्रकरणमा अर्को ‘ट्विस्ट’ : होटेलमा दुई पेस्तोल फेला, बर्दियाबाट मोटरसाइकल बरामद – Sodhpatra
डोटीका ३९ वर्षीय क्यान्सर पीडित रावलको निधन
धनगढीमा घर भत्किएर बिचल्लीमा परेका किरिया पुत्रीलाई अनेरास्वीयूद्वारा टेन्ट सहयोग (फोटो समाचार)
गोवर्धन पूजाको दिन स्ट्रिट पव्ज र वडा प्रहरी धनगढीले लगाए सडक पशु चौपायालाई रिफ्लेक्टीभ बेल्ट
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख तथा प्रहरी निरीक्षक बोहराको सरुवा
‘भोलिको नेपाल बन्द सफल पारौँ’ भन्दै विप्लव नेकपाद्वारा धनगढीमा मसाल जुलुस, के-के सुचारु हुन्छन् ?
ट्राफिक नियमको पालना नगरे कारबाही हुन्छ : कैलालीका ट्राफिक प्रमुख सिंह
अचानक धनगढीमा हावाहुरी, सचेत रहन आग्रह !
लगातार वर्षा भइरहेकोले सतर्कता अपनाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको आग्रह !
डोटीले जित्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि !
स्वर्गीय प्रहरी नायब उपरीक्षक अधिकारीको स्मृतिमा योगाश्रमलाई ५ लाख १ हजार १११ आर्थिक सहयोग
प्रताप र रचनाको स्वरमा ‘मैले माया लाउने कुन खालको’(भिडियोसहित)
सर्वसम्मत नेतृत्व छान्न भन्दै नाराबाजी
जयपृथ्वी नगरपालिका बझाङमा वडा स्तरीय न्यायिक अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न
अब अन्तरिक्षमा पनि हाम्रो हिस्सा छ: ओली
अनिश्चितकालका लागि काँग्रेस कैलालीको जिल्ला अधिवेशन स्थगित
पत्रकार मुकुन्द भण्डारी पितृ शोकमा, नेपाल प्रेस युनियन कैलालीद्वारा घरमा पुगेर समवेदना प्रकट
नेपाल वस्टर्न म्यानेजमेन्ट एण्ड इन्जिनियरिङ कलेज धनगढीद्धारा सन्तोषी टोलमा सरसफाइ
एमाले १०औँ महाधिवेशनमा उर्लियो जनसागर,विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताले खुसी हुँदै दिए शुभकामना
काँग्रेस महाधिवेशन : क्षितिज भण्डारीद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा, यस्ता छन् प्रतिबद्धता (भिडियो)
५२ क्विन्टल अवैध चिनीसहित धनगढीमा २ जना पक्राउ
बडुवाल हत्या प्रकरणमा अर्को ‘ट्विस्ट’ : होटेलमा दुई पेस्तोल फेला, बर्दियाबाट मोटरसाइकल बरामद
प्रकाशित : ९ मंसिर २०७८, बिहीबार २१:३८ November 25, 2021
धनगढी : कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ का २३ वर्षीय भूपेन्द्र बडुवाल हत्या प्रकरणमा अर्को ‘ट्विस्ट’ आएको छ । प्रहरीले भूपेन्द्रको हत्याको समयमा प्रयोग भएका दुई मोटरसाइकल बर्दियाबाट बरामद गरेको छ ।
प्रहरीले बर्दियास्थित रोयर एडभेन्चर रिसोर्टबाट घटनामा प्रयोग भएका दुई मोटरसाइकल बरामद गरेको हो । घटनामा दुई मोटरसाइकल र एक स्कुटर प्रयोग भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । स्कुटर फेला पर्न बाँकी छ ।
प्रहरीले सो रिसोर्टका सञ्चालक अतिश थापालाई पनि पक्राउ गरेको छ । यस्तै, कैलालीको टीकापुरस्थित सिद्धार्थ होटेलबाट प्रहरीले दुई पेस्तोल बरामद गरेको छ । बरामद भएको पेस्तोल घटनामा फरार रहेका नवीन रावल समूहको भएको प्रहरी बुझाइ छ ।
तिहार टीकाको भोलिपल्ट सिद्धार्थ होटेलनजिकै भूपेन्द्रको नवीन रावलको समूहले हत्या गरेको थियो । नवीनको समूहले विभिन्न घटनामा पेस्तोल देखाएर तर्साउने गरेको पाइएको र बरामद भएको पेस्तोल उनीहरूकै हुन सक्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
पेस्तोल होटेलको कोठामा रहेको शौचालयभित्र लुकाएको पाइएको थियो । घटनाबारे प्रहरी अनुसन्धानमा जुटेको छ । भूपेन्द्र हत्या अनुसन्धानमा सीआईबी, प्रदेश प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको टोली सक्रिय छ ।
होटेल संगम चिसापानीका सञ्चालक नवीन रावलको योजनामा खुकुरी प्रहार गरेर उनको हत्या भएको प्रहरीले दाबी गर्दै आएको छ । नवीन हाल फरार छन् । हत्यामा संलग्न आरोपमा १६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी छ । जसमध्ये १० जना पक्राउ परिसकेका छन् ।
यो पनि भूपेन्द्र बडूवालको हत्या आरोपमा थप १ जना सहित पक्राउ पर्नेको संख्या १० पुग्यो, ६ अझै फरार
५ घण्टापछि खुल्यो कैलालीमा अवरुद्ध पूर्वपश्चिम राजमार्ग